Friday April 05, 2019 - 21:19:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Thomas D. Waldhauser Taliyaha AFRICOM
Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa markii ugu horeysay qirtay in ay dad shacab ah ku laayeen duqeyn sanad ka hor ay ka fuliyeen duleedka degmada Ceelbuur ee wilaayada Galgaduud.
Duqeyntan oo dhacday bishii April ee sanadkii 2018 oo ku beegneyd bishii Rajab ee sanadkii 1439 ayey diyaaradaha Mareykanka ku beegsadeen gaari ka baxay magaalada Ceelbuur kunasii jeeday tuullo yar oo lagu magacaabo Dac.
Duqeyntaas waxaa lagu dilay laba nabadoon qof dumar ah iyo canug yar oo ay haweeneydaas wadatay laakiin taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa xilligaas ku andacooday in ay duqeyntaas ku dileen ugu yaraan shan dagaalyahan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Qaar ka mid ah ehellada dadka shacabka ah ee lagu dilay duqeyntaas oo xilligaas la hadlay warbaahinta ayaa gaashaanka u daruuray sheegashooyinka Mareykanka iyagoona soo bandhigay magacyada dadka lagu dilay duqeyntaas.
Hal sano ka dib, war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayuu ku qirtay in duqeyntaas lagu dilay dad shacab ah waxaana ay ku doodeen in sababta ku khasabtay in dadkaas ay ku tilmaamaan dagaalyahano ay ahayd in jawaasiistooda joogta Soomaaliya ay usoo gudbiyeen xog khaldan iyo natiijo aan sax ahayn.
Inkastoo Mareykanka laga wada dharagsan yahay inuu gumaad ba’an ku hayo dadka Soomaaliyeed uuna geysto duqeymo wuxuushnimo oo ka dhan ah dadka shacabka isagoo ku tilmaamaya argigixiso hadana waxaa aad looga yaabay qirashadan Naadirka ah ee uu sameeyey.
Dadka isha ku haya siyaasadda Mareykanka ee Africa ayaa tilmaamaya in qirashadan ay tahay mid uu taliska Mareykanka isaga khafiifinayo culeyska ay ku keentay warbixin 73 page ah oo dhawaan ay baahisay hay’adda Amnesty International taas oo soo bandhigtay ugu yaraan 5 dhacdo oo Mareykanka uu ku xasuuqay dad shacab ah oo ka dhacday wilaayada Sh/hoose oo kaliya.
Warbixinta Amnesty laguma soo hadal qaadin dhacdada Ceelbuur sidaas darteed ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Africa isagoo iska dhigaya mid hufan oo aan inkirin gaboodfalladiisa ayuu go’aansaday in uu qirto dhacdadan iyagoo ku tilmaamaya baaritaan ay iyaga oo qura sameeyeen, kadibna qirteen.
Warbixinta dhawwaan ka soo baxday Amensty ee looga hadlay duqeymaha wuxuushnimo ee Mareykanku uu ku hayo dadka Soomaaliyeed, waxaa lagu sheegay in duqeymaha Mareykanka ay dhibaatooyin ba’an u geysteen dadka rayidka ah islamarkaana taliska ciidamada mareykanka uu aalaaba dafiro khasaaraha ay u geystaan shacabka.
Sawirrada hoose waa Nabadoon Cali Hareeri iyo Abwaan Yuusuf dhegeey oo kamid ahaa dadkii lagu dilay duleedka Ceelbuur